ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပရိုတင်းဘားဆိုတာဘာလဲ။ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > whey မပါဘဲပရိုတိန်းဘား - ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရန်
whey မပါဘဲပရိုတိန်းဘား - ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရန်
၁၃အကောင်းဆုံးပရိုတင်းဘားများအာဟာရပညာရှင်တစ် ဦး ၏အဆိုအရ
gluten- အခမဲ့, အနိမ့်သကြားပရိုတိန်းဘား။ ONE ။
အိုမီဂါ -၃ နှင့်မြက်ဗဟိုဘဏ်ပရိုတိန်းဘား။
ပရိုတိန်းထမ်းပိုးဖြစ်သည့်ကျွန်ုပ်တို့ peptide နှောင်ကြိုးကြောင့်၎င်းတို့သည်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် BFF များဖြစ်သည်။ ငါ Tracy Lockwood Beckerman ကျွန်ုပ်သည်နယူးယောက်မြို့တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအာဟာရဗေဒပညာရှင်ဖြစ်သည်။ ညအချိန်တွင်ပရိုတင်းဘားများသည်အဘယ်ကြောင့်တည်ငြိမ်နေကြောင်းသင်သိရန်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ဖြစ်သည်။ Go Snacks and Exercise Rest သင်သဘာဝကျကျကျန်းမာပုံရသော်လည်းယနေ့ဘုန်းကြီးသောသကြားလုံးဘားတစ်လုံးတည်းသာစားမည်ဆိုလျှင်သင်မည်သို့သိသနည်း။ ပရိုတိန်းဘားများနှင့် Tracy ခွင့်ပြုထားသော kernel များနှင့်မည်သည့်အရာကိုရှာဖွေရမည်ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပါမည်။
ဘားတစ်ခုချင်းစီတွင်မည်မျှစားသုံးခြင်းသည်များသောအားဖြင့်သတိပြုပါ၊ များသောအားဖြင့်တစ်ခုရှိသည်၊ သို့သော်သင်၏ဘားသည်သရေစာဖြစ်လိမ့်မည်ကိုသေချာစေရန်အစဉ်အမြဲအမှတ်အသားကိုဖတ်ပါ၊ အနည်းဆုံး ၃၀ ဂရမ်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့် ၇ ခုထက် ပို၍ ပါ ၀ င်သောဂရမ်ရှိသည်။ ပရိုတိန်းနှင့်ငါးဂရမ်အမျှင်ဓာတ်ဤအစားအစာသည်အစားအစာဖြစ်လျှင်၎င်းကိုပိုကြာရှည်စွာနေထိုင်ရန်ကူညီရန်ပရိုတိန်းနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ အမျှင်ဓာတ်မြင့်မားသောကြောင့်မြင့်မားသောဖိုင်ဘာကိုမရွေးချယ်ပါနှင့်။ အမျှင်ဓာတ်မြင့်မားသောထုတ်ကုန်များသည် GI ပြgasနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ အများအားဖြင့်အစားအစာတစ်ခုလုံးအတွက်အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှသင်၏နေ့စဉ်ဖိုက်ဘာကိုရယူခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အစာအိမ်နာလည်းမရှိ။ ဤအကြောင်းအရာအတွက်အဆီသို့မဟုတ်ပါဝင်သောအရာများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ သင်သိနိုင်တာ၊ ဗာဒွန်သီဟိုor်သို့မဟုတ်ဖရုံသီးအစေ့များလိုမဟုတ်ဘဲသင်သိပြီးသားသင်ပါဝင်တဲ့ဗေသလစီမီလ်မီတာ Zeta ပါတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကနေလာတာ။ ဒီပစ္စည်းတွေကိုငါပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါနင့်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်တာကိုနောက်တာပါ။ ငါပြောနေတာပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများနည်းလေလေသူတို့သည်အတိုချုပ်နှင့်မှတ်မိလွယ်သောဖြစ်သင့်သည်။
ရိုးရှင်းသောပါဝင်ပစ္စည်းများသည်အနည်းငယ်သာထပ်တိုးသည်၊ သကြားနည်းသည်၊ အစာကြေရန်လွယ်ကူသည်။ ဘားတွင်အသုံးပြုသောပရိုတင်းအမျိုးအစားကိုစဉ်းစားပါ။ ကော်လာဂျင်၊ ကုလားပဲနှင့်ပဲပရိုတင်းတို့သည်သင်၏အစစ်အမှန်ကြိုက်နှစ်သက်ရာများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်အစစ်အမှန်ရင်းမြစ်များမှလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်တွေ့ရှိနိုင်သောအနည်းဆုံးသကြားဓာတ်ပါဝင်သည့်ဘားတစ်ခုကိုရွေးပါ၊ သကြားဓာတ်ပါသောဖော်မြူလာများနှင့်မလှည့်စားပါနှင့်၊ ပရိုတင်းဟင်းချိုများသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်အကျိုးရှိသဖြင့်အညိုရောင် muffins သို့မဟုတ် smartcookies များကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။ အားကစားသမား၊ ယေဘုယျအားဖြင့်နေ့လည်စာတွင်သင်မနှစ်သက်သောဘားကိုစမ်းကြည့်ပါကသင့်ခန္ဓာကိုယ်က၎င်းကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ခြင်းကိုမကြိုက်ပါ။ ယခုအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ထိပ်တန်းရွေးရန်ဖြစ်သည်။ သင်အမှန်တကယ်ဖတ်နိုင်သောဘုံပါဝင်ပစ္စည်းများရှိပါ၊ အကန့်အသတ်ရှိသောပါဝင်ပစ္စည်းများစာရင်းရှိပြီးအရက်ဆိုင်များတွင်သင်မြင်နိုင်သောအရာအားလုံးကိုသုံးပါ။ Health Warrior စားသောက်ကုန်များတွင်အရသာရှိသည့်ပရိုတင်းများ၊ chia အစေ့များနှင့်ဖရုံသီးအစေ့များကဲ့သို့သောအခြားအကြီးအသေးများပါဝင်သည်။ တစ်ဘားလျှင်ပရိုတင်းဂရမ်များနှင့်ဖိုင်ဘာ ၅ ဂရမ်၊ ဤအစေ့များမှ omega-3 fatty acids နှင့် zinc တို့ကကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘားကိုသက်သတ်လွတ်စားသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအစစ်အမှန်အစားအစာပရိုတိန်းနဲ့ superfoods ၂၀ ကျော်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာပါ။ ဒါကြောင့် Bar ဟာရေခဲသေတ္တာထဲကိုတောင်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဘားမှာဗာဒံ (သို့မဟုတ်) မြေပဲထောပတ်မှပြုလုပ်ထားသောကျန်းမာတဲ့အဆီများပါ ၀ င်ပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောကယ်လိုရီဘားနှင့်သကြားဓာတ်ပါ ၀ င်မှုမြင့်မားပုံတို့သည်သဘာဝရင်းမြစ်များမှဖြစ်ပြီး Whole Foods နှင့် Starbucks ရှိစုံလင်သောအရက်ဆိုင်များကိုရရှိနိုင်သဖြင့်မနက် ၆ နာရီတွင်အစည်းအဝေးများသို့သွားရန်မလိုပါ၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသောဒေါသထွက်နေသည့် Tang Grisno Macro Bars သည်သက်သတ်လွတ်စားသူများနှင့် အပင်ပေါက်သည့်အညိုရောင်ဆန်ပရိုတိန်းပဲပရိုတင်းနှင့်သီဟိုlike်များကဲ့သို့သောအရာများစွာပါ ၀ င်သည်။ သီဟိုand်နှင့်ပိုက်ဆန်အစေ့တို့သည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အား ၂ ဂရမ်သာထိုင်ခင်းပေးသောရောင်ရမ်းခြင်းဆန့်ကျင်သောအိုမီဂါ - ၃ ဖက်တီးအက်စစ်များ၏ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုတင်း ၁၁ ဂရမ်ပါသောပရိုတင်း ၁၁ ဂရမ်ပါသောအပင်များသည်ဗီတာမင်စီ၊ သံနှင့်ကယ်လစီယမ်တို့ကမြက်နို့တိုက်သည့်နွားများမှထွက်သောသန္ဓေသားပရိုတိန်းများကိုပေးသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်မြက်ကျက်စားသည့်လမ်းသို့မဟုတ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီး + ၇ ဂရမ်ဖိုင်ဘာနှင့် DHA နှင့် EPA ငါးမီလီဂရမ် ၂၅၀ ငါခံစားမိသည့်အရည်တစ်မျိုးကိုစမ်းသပ်ရန်မျှော်လင့်နေသည့်ရေနံသည်အသီးများမှကျန်းမာသောအရက်ဆိုင်များနှင့်အသိအမှတ်ပြု gluten-free oats နှင့်သူတို့၏အရသာများသည်ဤပန်းသီးနှင့်ဂျင်းအခွံတို့ကိုမြည်းစမ်းသင့်သည်။ သင့်မှာစိတ်ဆိုးနေတဲ့အစာအိမ်ရှိရင် Andoats ဘားဟာလည်းအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မန်းဂနိစ်ရဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Rx Bars ဟာစျေးကွက်ထဲမှာအရသာအရှိဆုံးအရက်ဆိုင်တွေဖြစ်လာတယ်။ သူတို့ဟာဥဖြူဥနဲ့သူတို့ရဲ့ gluten တို့မှပရိုတိန်းတွေနဲ့ထုပ်ပိုးထားတယ်။ အထုပ်၏ရှေ့မှောက်၌အခမဲ့ပဲပုပ်နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများထုတ်ကုန်များနှင့်သကြားဓာတ်များပါ ၀ င်သည်။ ချစ်စရာအရက်ဆိုင်များသည်သကြားဓာတ်ပါဝင်မှုတစ်ခုလုံးမှကျန်းမာသောသရေစာကိုရှာဖွေရန်နှင့်အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။
အချို့အရက်ဆိုင်များသည်ဂရမ်သာရှိသည်။ ငါအမြဲတမ်းလုံးဝအကြွင်းမဲ့သကြား overkill ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲချို၏သေးငယ်တဲ့အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ဘို့ပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်အစားဖြစ်သော, သူတို့ရဲ့ mini ကိုမှောင်မိုက်ချောကလက်ပင်လယ်ဆားဘားမပါဘဲအိမ်မှဘယ်တော့မှမ။ ငါစားရန် Pulledients နှင့်အတူမျှတသောအစားအစာများရှိဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံမှာပရိုတိန်းဘားပေါ်မှာဆုံးဖြတ်တဲ့အခါအပြည့်အဝစားဖို့ထိုင်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး သွားလာရင်းလွယ်ကူစွာသွားနိုင်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောသဘာဝပရိုတင်းများနှင့်အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းသည့်အမျှင်များဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ အကယ်၍ သင် Abar ကိုရောက်ရှိရန်လိုအပ်ပါကသင်အသုံးပြုသောအရွယ်အစားနှင့်မှန်ကန်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုကောင်းစွာစစ်ဆေး။ ကုန်ပစ္စည်းများ YouTubechannel အဲဒါငါကြိုက်တာပဲ
အတော်များများပရိုတိန်းဘားထို့အပြင်ဆက်ပြောသည်မြင့်မားသောပမာဏဆံ့သကြားနှင့်အသုံးပြုပါမကျန်းမာဘူးမြင့်မားသော fructose ပြောင်းဖူးရည်ကဲ့သို့သောချို, သင်၏ပိုလျှံ fructose ဖြည့်စွက်အစားအစာအသည်း၊ အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါတို့ကိုများများစားစားစားသုံးပါကသင်၏အန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေနိုင်သည် (၃၊ ၄၊ ၅) ။
# 1 GoMacro MacroBars ။
#2Epic အသားဘား။
#3EPIC စွမ်းဆောင်ရည်ဘား။
#4Go Raw အရွတ်ပရိုတိန်းဘား။
#5အဝတ်အချည်းစည်းအာဟာရအဝတ်အချည်းစည်းဘား။
# ၆ ကျန်းမာရေးစစ်သည်၏အော်ဂဲနစ်ဖရုံသီးမျိုးစေ့ပရိုတိန်းဘား။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်မလုံလောက်နိုင်သည့်အသားများမလိုအပ်သည့်အရေးကြီးသောအာဟာရများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။စက်ရုံ-အခြေခံပရိုတိန်းဘားတစ် ဦးကျန်းမာရေခဲမုန့်များနှင့်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည် superfood ဖြင့်ထုပ်ထားသောကြောင့်သူတို့သည်အစားထိုးနိုင်သည်။၅ ။ 2018 ။
အကယ်၍ သင်သည်တက်ကြွသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်အစာစားရန် (သို့) ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ရေစာမလုံလောက်ပါက၊ပရိုတိန်းဘားသင်၏တစ်နေ့တာလုံးသယ်ဆောင်နိုင် သို့သျောလညျး, က Parker ဘယ်တော့မှဖို့ကပြောပါတယ်စားသည်တစ်ရက်ထက်ပိုသော။
ဘယ်တော့ဖြစ်သင့်ပရိုတိန်းဘားအစာစားခြင်း? သင်မှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်းပျော်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ပရိုတိန်းဘားကြိုတင်သို့မဟုတ် post ကိုလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်ပရိုတိန်းဘားသင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကြွက်သားပြုပြင်မှုနှင့်ကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။12 2020 ။
ဘယ်တော့လဲသင့်တယ်ဖြစ်လိမ့်မည်ပရိုတိန်းဘားအစာစားခြင်း? အဖြစ်မင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မှန်း, အကောင်းဆုံးအချိန်ရန်ချစ်တယ်ပရိုတိန်းဘားကြိုတင်သို့မဟုတ် post ကိုလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်ပရိုတိန်းဘားကူညီနိုင်သည်ရန်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပါက၎င်းသည်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ရန်ကြွက်သားပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားမှု။12 2020 ။
လုံးဝ! သူတို့မှာအခြားအရာတွေထက်ကယ်လိုရီနည်းပြီးသကြားနည်းတယ်ပရိုတိန်းဘားClif Builders လိုပဲပရိုတိန်းဘား၂၀ ဂရမ်ရှိတယ်ပရိုတိန်း။
သင်တစ် ဦး Lacto-ovo ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သက်သတ်လွတ်ဆိုလိုတာကစားသည်နို့နှင့်ကြက်ဥ (သူတို့တစ်ချိန်ကအသက်မရှင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါမင်းတို့လုပ်နေတယ်လို့ယူဆတယ်)၊ ဒီနှစ်ခုလုံးဟာအရည်အသွေးကောင်းတဲ့အရင်းအမြစ်တွေဖြစ်တယ်။ပရိုတိန်း။ သင်ဆက်ဆက်ရွေးချယ်နိုင်သည်ပရိုတိန်းဘားသို့မဟုတ်အဆင်ပြေစေရန်အချိုရည်များ၊ သကြားသို့မဟုတ်အဆီများစွာပါဝင်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုကန့်သတ်ရန်သေချာပါစေ။
မသာဖြစ်ကြသည်ပရိုတိန်းဘားအတွက်ကောင်းတယ်ကိုယ်အလေးချိန်ကျ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကကျန်းမာတဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ထိန်းသိမ်းထားဘို့အလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်ကြသည်။ပရိုတိန်းဖြည့်ချက်ပြုတ်နည်းများ, ပင်ပြီးနောက်, ရေရှည်ကျန်းမာရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်မင်းမင်းရောက်ပြီကိုယ်အလေးချိန်ကျရည်မှန်းချက်များ၊ပရိုတိန်းလုပ်နိုင်တဲ့သင့်ခွန်အား၊ ကြွက်သားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီသည်။
ပရိုတိန်းအမှုန့်မပါဘဲပရိုတင်းဘားများ - ၃/၄ ခွက်ပရိုတိန်းအမှုန့်အစား ၁ ခေါက် oat ဂျုံမှုန့်ဖြင့်အောက်ခြေအခြေခံစာရွက်ကိုသုံးပါ။ မြေပဲထောပတ်နှင့်ပြုလုပ်ထားသော oatmeal ပရိုတိန်းဘား (စုစုပေါင်းစာရွက်၏ ၁၆/၁၆) တွင်ပင်ပရိုတင်း ၇ ဂရမ်ကျန်ရှိနိုင်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးပရိုတိန်းဘားအရသာရှိပါသလား
Real Peanut Butter - မြေပဲထောပတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။ Whey Protein Powder: သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရသာကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုပါ၊ သို့သော်အနံ့အရသာရှိသောသကြားများကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
Whey protein bar သည် gluten ကင်းပါသလား။
ဤအရက်ဆိုင်များသည်အနည်းငယ်သာကြည့်ကောင်းမြင်နိုင်ပေမည်၊ ၁၂ ဂရမ်ပရိုတင်း၊ ၉ ဂရမ်အဆီနှင့် ၂၁၀ ကယ်လိုရီတို့သည်ဤဘားကိုပုံမှန်စံပြပရိုတင်းဘားတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ သို့သော်၎င်းကိုခွဲခြားသည်မှာအရသာဖြစ်သည်။ သူတို့မှာအရသာများစွာရှိသည်၊ ဘားတိုင်းသည် gluten၊ နို့၊ ပဲ၊ ယုတ်လျော့သည့်သကြားများမရှိဘဲ၎င်းအားအထိခိုက်မခံသောစနစ်များရှိသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
မဏ္switchိုင် switchblade ပြန်လည်သုံးသပ်